Izicelo ezinhle kakhulu zokwenza ama-slideshows e-Android ne-iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Izinhlelo zokusebenza ezizokwakhiwa isilayidi Bayanda ngokufunwa ngenxa yokuthi noma ngubani angazizwa njengochwepheshe eguqula izithombe zakhe ngemiphumela ethile futhi ezabelana "nomphakathi" wazo.
Izici ezahlukahlukene zingathinta ukukhetha kwesicelo ozosisebenzisa, njenge:
la uhlobo lwemiphumela: Zonke izinhlelo zokusebenza ezifanele usawoti wazo kufanele zinikeze ikhwalithi enhle eningi, noma kunjalo ngokusobala akufanele sicabange ukuthi umphumela owodwa, noma ngabe umangalisa kanjani, unganele ukwenza umbukiso wesilayidi osangene;
la ukusetshenziswa kalula: imiyalo nebha yamathuluzi kumele kube enembile ukwenza umsebenzi ube lula kubasebenzisi;
la lula ukwabelana: izinketho zokwabelana kufanele zifinyeleleke .... chofoza !!
Kulesi sihloko, sizozama ukunikeza umhlahlandlela owusizo kubo bonke abafuna ukuzama inhlanhla ngezinhlelo zokusebenza zombukiso wesilayidi ngokuchaza izici zabo, ubuhle nobubi babo. Ukwenza izinto zibe lula, sizohlukanisa i-athikili ibe izigaba ezintathu, eyodwa inikezelwe kuphela kubasebenzisi Android, eyodwa inikezelwe kuphela kubasebenzisi iPhone futhi eyodwa inikezelwe kuzinhlelo zokusebenza ze-slide show ezikhona ku bobabili Izilinganiso
FUNDA NONKE: Izinhlelo zokusebenza ezingama-30 zokuhlela amavidiyo nokuhlela ama-movie (i-Android ne-iPhone)
Uhlelo lokusebenza lombukiso wesilayidi oluhamba phambili lwe-Android
Ngaphandle kokungabaza, isicelo esithandwa kakhulu embonini esinokulandwa okungaphezu kwezigidi eziyi-13.
Uhlelo lokusebenza lunikeza imisebenzi eminingi, likuvumela ukuthi ulayishe izithombe, ama-slideshows wedizayini, engeza ukugqwayiza, setha imibala, imiphumela, nokunye okuningi. Photo FX Live Wallpaper inomhleli wesithombe omuhle kakhulu, iyenzeka ngezifiso, futhi ikuvumela ukuthi wakhe amaphephadonga wekhwalithi ephezulu. Ngaphezu kwalokho, inembile kakhulu ngakho-ke kulula ukuyisebenzisa ngisho nakwabangenalwazi kangako.
Okubi kubandakanya ukungakwazi ukwethula ikhamera ngohlelo lokusebenza olusebenzayo, ukuthambekela kokuphahlazeka uma kunamafolda amaningi kakhulu avulekile, kanye nokushoda kokuzenzakalela kwesithombe.
okwesibili) Isithombe sombukiso wesilayidi nomenzi wevidiyo:
Lolu hlelo lokusebenza lunikeza isipiliyoni sokudalwa kwesilayidi esifanelekile ngokuhlangana kwenhlanganiso enembile namathuluzi athuthukile.
Isithombe sombukiso wesilayidi inikeza inani elikhulu lemiphumela, izihlungi namafreyimu, ahambisana nokuphathwa kokuqukethwe okulula okwenza kube lula ukudala ama-slideshows ekhwalithi ngokungeza iziqeshana eziqukethwe kugalari kumafolda ahlukene. Ngasikhathi sinye, kunzima ukwabelana ngamavidiyo alondoloziwe; futhi, ikhwalithi yesithombe iyashintsha ngokuya ngeleveli ekhethiwe.
C)I-PIXGRAM - Umbukiso Wezithombe Zomculo:
Lolu hlelo lokusebenza lomenzi wesilayidi lwenza kube lula kunoma ngubani ukuthi alayishe izithombe, akhethe umculo abawuthandayo, engeza izihlungi nemiphumela, azenzele owabo umbukiso wesilayidi bese wabelana ngawo nomhlaba futhi ngokuqinisekile uwuhlelo lokusebenza olufanele lwabaqalayo.
Iphikiseli ikuvumela ukuthi ulondoloze imibukiso yama-slide ngezakhiwo ezahlukahlukene, inebanga elihle kakhulu lokuhlunga, futhi idinga ukusetshenziswa komculo womuntu siqu. Kungenzeka kungabi uhlelo lokusebenza olunekhono kakhulu emakethe, kepha luyawenza umsebenzi.
kabusha) Umdali wesethulo:
Umdali wesethulo Akukujabuleli ukuduma kwezicelo ezethulwe kumaphoyinti adlule, kepha inikeza amathuba amahle kakhulu kulabo abaqalayo ekwakheni ama-slideshows: ngenxa yesixhumi esibonakalayo enembile, kulula kakhulu ukulayisha izithombe, ukuzifuna, ukumisa ukudlala okungahleliwe nokunye okuningi. Kukhona futhi iwijethi yokuvuselelwa kwesithombe okuzenzakalelayo, okukuvumela ukuthi ungeze okusha.
Ngakolunye uhlangothi, ukunika amandla isici sesikrini esibanzi kuthanda ukuphahlazeka futhi akunazici ezinikezwa izinhlelo zokusebenza kusigaba esifanayo.
Uhlaka losuku uhlelo lokusebenza olwenzelwe abahleli abangochwepheshe futhi luhlinzeka abasebenzisi ngephakethe elicebile, elihambisana nemenyu enhle kakhulu enokwakheka nokuhlelwa okusebenzisanayo. Uhlelo lokusebenza lungasetshenziswa ku-inthanethi futhi kungenzeka ukudala ama-slideshows ekhwalithi, usebenzisa imisebenzi ehlukahlukene ukunikeza ukuthinta okuhlukile kuma-slideshows akho.
Ngeshwa, iDayframe ivame ukukhipha ibhethri ledivayisi elisetshenziswa ngesikhathi esifushane futhi kungaba nzima kwabaqalayo ukulisebenzisa.
Uhlelo lokusebenza oluhamba phambili lwe-slideshow lwe-iPhone
I-PicPlayPost uhlelo lokusebenza olunembile olukuvumela ukuthi uhlanganise kalula izithombe, amavidiyo, umculo nama-GIF, okwenza kube yinye yezinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu zohlobo lwazo. Uhlelo lokusebenza lutholakala kunoma ngubani futhi lunikeza imisebenzi esebenzayo ukujoyina kalula amavidiyo nezithombe.
I-PicPlayPost Ine-interface enembile evumela ukuthi ufake izithombe ezifika ku-9, GIF noma amavidiyo ngephrojekthi ngayinye futhi ubenze bathandeke ngokwengeziwe ngokukhetha okuhle kwemiphumela yokulungiswa okuphezulu.
Umculo onqunyelwe ngokunqunyelwe weSlideshow nokusetshenziswa kwe-watermark kumbukiso wesilayidi, yize ungenziwa ngezifiso, awumnandi neze.
I-SlideLab ikuvumela ukuthi uguqule izithombe zibe amavidiyo ngemizuzu embalwa nje ngokufaka umculo oshumekiwe noma owenziwe ngokwezifiso kuhlelo lokusebenza. Ama-slideshows enziwe angagcinwa kuselula, agcine usayizi wawo woqobo, noma abiwe kumaphrofayli abo omphakathi asevele eguqulelwe esinqumweni esidingwa yinethiwekhi yokuxhumana nabantu abafuna ukuhlanganyela kuyo. Isicelo sinikeza nezihlungi ezahlukahlukene ongazisebenzisa ezithombeni zakho.
Iphutha kuphela I-SlideLab ayikuvumeli ukusebenzisa umculo ngo- iTunes ukuhlanganyela Facebook O Instagram. Kusengukusebenza okuhlukile.
C) Umqondisi Wezithombe:
Umqondisi wesethulo ivumela i-iPhone / iPad ukuze ube yipulatifomu yemibukiso yesilayidi, usebenzisa izithombe ezigcinwe kudivayisi. Inani lemiphumela enikezwayo liyajabulisa, ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulondoloze ama-slideshows in HD ngisho kusikrini esigcwele. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi wabelane ngama-slideshows kumanethiwekhi omphakathi ngaphandle kobunzima.
Umqondisi wesethulo Ine-photo editor elula kakhulu futhi enembile futhi ikuvumela ukuthi udale amavidiyo omculo.
Ngokuphambene nalokho, isivinini sokucubungula singathikanyezwa yinkumbulo ye-iPhone. Ngaphandle kwalokhu, kusengaphikwa ukuthi umenzi wesilayidi omuhle kakhulu ongatholakalela iOS.
I-Picflow Ayinazo zonke izici ezinye izinhlelo zokusebenza ezinikezayo, kepha wuhlelo lokusebenza olulawulwayo ukuphatha nokulawula lapho wenza ama-slideshows. Lolu hlelo lokusebenza likuvumela ukuthi usethe isikhathi sokudlala sesithombe ngasinye esilayishiwe bese uhlela ukuthi uskrole ngomculo wakho wangemuva owukhethile ongalayishwa futhi kusuka ku-iPod.
PicFlowNgemizuzu embalwa nje, ikuvumela ukuthi wakhe izethulo ezinamandla nezinamandla ukuhlanganyela ku-Facebook noma ku-Instagram, ukunqampula izithombe ngomsebenzi wesilayidi nengcosana nokusebenzisa okunye kokushintshwa okungu-18 okutholakalayo.
Ngeshwa inguqulo yamahhala ilinganiselwe futhi ukufaka ikhodi kwevidiyo akuqhubeki I-30 FPS.
iMovie inikeza inani elikhulu lezici nezinga eliphakeme lekhwalithi, okwenza kube ngesinye sezicelo ezinhle kakhulu zokwenza imibukiso yamaslayidi iPhone. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ushintshe umsindo wesiqeshana ngasinye osidalayo futhi unikeze izingqikithi eziningi zama-movie, ukuhwebelana, imiphumela yomsindo nezihloko. Ngalezi zizathu, abasebenzisi abaningi abazinaki ezinye izinhlelo zokusebenza futhi basebenzise iMovie kuzo zonke izidingo ezihlobene nokuhlelwa kwevidiyo noma ukudala i-slideshow.
Izizathu zokuthi kungani lolu hlelo lokusebenza lwenzelwe iPhone kungenye yezinto ezinhle kakhulu zokwakha ama-slideshows. Ngakolunye uhlangothi, uhlelo lokusebenza aluguquguquki kakhulu futhi kunzima ukubhekana nabaqalayo.
FUNDA NONKE: Dala amavidiyo wesithombe, umculo, imiphumela efana nesilayidi sithombe kusuka ku-PC
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zeSilayidi ze-Android ne-iPhone
Iyatholakala kuwo womabili amadivayisi Android lokho iPhone , I-VivaVideo inenguqulo eyisisekelo ongayisebenzisa futhi uyilande mahhala. Ngenkathi uhlela izithombe zakho, ungakhetha kusuka kokukodwa "imodi yepro" ngokuvumelana nezimo okukhulu futhi "imodi esheshayo" yenguqulo esheshayo futhi ezenzakalelayo. Ikhamera kuhlelo lokusebenza ikuvumela ukuba urekhode amavidiyo ngenkathi usebenzisa imiphumela engaphezu kwengu-60 ekhethekile. Ngemuva kwalokho ungangeza ukuhwebelana, imiphumela yomsindo, uphinde uphindaphinde ividiyo oyenzile.
Lapho uphuma kuhlelo lokusebenza, izinguquko zakho zizolondolozwa ngokuzenzekelayo futhi ungahlanganisa kalula amavidiyo ngesici sebhodi lezindaba.
Ngeshwa, inguqulo yamahhala yohlelo lokusebenza ifaka i-watermark engathandeki kumavidiyo, ifaka izikhangiso eziningi, nomkhawulo wesilayidi wemizuzu emihlanu. Ukuqeda lokhu kukhungatheka, kufanele uthengele uhlobo lwepro $ 2,99,3.
Itholakala kubo bobabili abasebenzisi Android yabo bobabili abasebenzisi iPhone futhi inikeza amathani wezinketho zokuhlela ama-slideshows, izithombe, amavidiyo, nokuningi. UMovavi Kumahhala, futhi ukuhlelwa kwayo kwevidiyo nokulalelwayo kunikeza isipiliyoni sobuchwepheshe, kanye nekhono lokufaka imiphumela esezingeni eliphakeme futhi usebenze ngamafomethi amaningi wevidiyo. Kungenzeka ukujwayeza umsindo, urekhode ngqo kusuka esikrinini ukuze ubambe izingcingo zevidiyo noma eminye imisebenzi eyenzeka ngesikhathi sangempela kudivayisi yakho futhi nokwenza ngokwamanani noma ukuphinda uthinte isithombe kalula.
Kukhona nezinye izici ezinhle njengokukwazi ukudala imibhalo engezansi yangokwezifiso. UMovavi Iphinde ibe yinguqulo ekhokhelwayo, izinketho zayo kuqala shiya $ 59,95. Abanye abasebenzisi bathole amathuluzi kunzima ukuwasebenzisa ngaphandle kokuthi banobuchwepheshe be-tech.
Itholakala kubo bobabili Android lokho iOS Futhi uhlelo oluhle kakhulu lokwenza izethulo ze-Instagram newsfeed ngoba ifometha ividiyo ibe yisikwele. Kodwa-ke, kuze kube manje, inenketho yefomethi yokuma ngobude elungele yona Instagram futhi I-IGTV. Uhlobo lwamahhala lwalolu hlelo lokusebenza lubeka umkhawulo wesilayidi sesithombe esiyisikwele kumasekhondi angama-30 nombukiso wesilayidi omile ube imizuzwana engu-11, okukhungathekisa impela.
Sekukonke, I-MoShow kuzoba nzima ukuyisebenzisa ngaphandle kokutshala imali enguqulweni yepro. Uhlelo lokusebenza I-MoShow ugu oluphelele $ 5,99 ngenyanga noma $ 35,99 ngonyaka.
Njengoba ukwazi ukuqagela kalula, kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezinikezelwe ukuhlela izithombe namavidiyo futhi kuvame ukuba nzima ukuwaqonda nokukhetha ukuthi iziphi ezifanele izidingo zethu futhi uzichaze zonke.
Sizamile; Manje okusele ukwehlela ebhizinisini!
FUNDA NONKE: Isicelo sokwakha izindaba kusuka ezithombeni nakumavidiyo omculo (i-Android - i-iPhone)